Japana: Manova ny Fankalazàna ny Taombaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2018 19:46 GMT
Fotoampialantsasatra anisan'ny lehibe indrindra ho an'ny ankamaroan'ny mponina ao Japana ny Taombaovao, mitondra lanja miavaka izay rehetra miseho ny “voalohan'ny taona”: ny andro voalohan'ny taona, ny fiposahan'ny masoandro voalohany, ny nofinofy voalohany, ny varotra voalohany…
Raha ny mahazatra, manisy ezaka mafy anatin'ny fikarakaràna ny Taombaovao ny olona, mamafa ny trano iray manontolo, ary mahandro sakafo manokana antsoina hoe osechi, andro vitsy alohan'ny fivadihan'ny taona. Mivory daholo ireo tapaka sy namana mandritra ny fety ary mifanakalo ireo fiarahabana fanao amin'ny Taombaovao. Izany no nisy hatrizay, farafaharatsiny.
Tadidin'ny Bilaogera akane3 ny fomba fankalazany ny Taombaovao fony izy nialehibe ary ampitahainy amin'ny fomba fandanian'ny zanany io fotoampialantsasatra io.
Manontany tena aho hoe mba olona firy no mankalaza ny Taombaovao amin'ny fomba nentim-paharazana…
Fony aho mbola kely, isaky ny manakaiky ny Taombaovao, mandalo mamangy foana ireo tapaka sy namana ho an'ny fiarahabana nahatratra ny Taombaovao.
Be herehina tsy tahaka ny mahazatra tamin'izany ary fotoana miavaka miaraka aminà fofonà Taombaovao tena izy io andro io.
Feno zavatra tsy hita afa-tsy amin'ny Taombaovao ihany koa ny Osechi.
Kanefa, amin'ity faha-20 taonan'ny vanimpotoana Heisei ity, na ny osechi aza dia lasa feno zavatra fahita manerana ny tanàna amin'ny fotoana rehetra.
Tsy mahatsapa ny [osechi] ho zavatra miavaka ary tsy taitaitra ny ankizy amin'izao fotoana izao, izay afaka antsoina hoe ankizin'ny vanimpotoan'ny hatendankanina. Toa izao no zavamisy.
Fanao nahazatra koa ny mampanidina papango mandritra ny fialantsasatry ny Taombaovao, izay niova rehefa nandroso ny taona. Mizara izay hitany nandritra ny andron'ny Taombaovao ny bilaogera sorao, izay mipetraka anatinà tanàna ambanivohitra. Manoratra izy:
Nahita ankizy roa mpianatra eny amin'ny sekoly fototra aho ary olon-dehibe iray mety ho ray na raiben-dry zareo izay nampanidina papango teo ampitan'ny làlan'ny toeram-pambolena.
Niezaka mafy ny hampanidina papango vita tànana ireto ankizy roa ary hitako ho nahafatifaty izany.
Mahafinaritra koa ny mandany ny Taombaovao mampanidina papango eo amin'ny làlan-tanimbary any ambanivohitra hoy aho [tamin'ny tenako], toa izay hitsidika tany lavitra.
Hatsumode: Filaharambe eny amin'ny Doany Hanazono, Tôkyô.
Mbola malaza eo amin'olona marobe ny hatsumode, na koa ny famangiana voalohany ny doany na tempoly, tsy tahaka ireo fomba hafa fanao amin'ny Taombaovao. Vao nahafantatra tsy ela izay ny mombamomba ny tantaran'ity fomba fanao ity i mmpolo, izay zatra nandeha taminà doany efatra tao an-tanàna ho an'ny hatsumode, ka nanova ny fombany isan-taona:
Fa momba izany ihany, vao haingana izay no fantatro fa tsy fomban-drazana Japoney efa ela ny Hatsumode, fomba izay manosika ny olona handeha eny amin'ny doany ary hivavaka rehefa Taombaovao, fa natomboky ny orinasan-dalamby iray tamin'ny vanimpotoanana Meiji. Mitovy amin'ny Andron'ny Mpifankatia. Rehefa fantatro izany, nanapa-kevitra ny tenako ny hanatsotra ny Hatsumode-ko manomboka amin'ity taona ity. Tapaka ny hevitro fa any amin'ny Doany Azuma ihany no aho no handeha.
Raha eritreretina marina, tsy voateny tao anatin'ny tantaran'ny vanimpotonana Edo na tao amin'ny ukiyoe ny Hatsumode. Tena kinga saina ilay mpiasan'ny orinasan-dalamby ka.